တန်းဆင်းဇုန်တိုက်ပွဲမှာဖျာဝင်ခင်းနေတဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ ဘာတွေမှားနေလဲ??? - Sports Gabar
တန်းဆင်းဇုန်တိုက်ပွဲမှာဖျာဝင်ခင်းနေတဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ ဘာတွေမှားနေလဲ???
October 8, 2019 October 8, 2019 - by Lu Nyochaw
ပရီးမီးယားလိဂ်(၈)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာပဲ ကြီး(၆)ကြီးဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးလ်၊ ချဲလ်ဆီး၊ အာဆင်နယ်၊ မန်စီးတီး၊ စပါး နဲ့ မန်ယူနိုက်တက် အသင်းတွေကြားမှာ ရမှတ်ကွာဟချက်တွေကလည်း မထင်မှတ်လောက်အောင် ကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။
အဆင့်(၂)ကနေ (၅)အတွင်းရှိနေတဲ့ မန်စီးတီး၊ အာဆင်နယ်နဲ့ချဲလ်ဆီးတို့ဟာ ရမှတ်ကွာဟချက်ကျဉ်းမြောင်းနေပေမဲ့၊ ထိပ်ဆုံးကပြေးနေတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းကတော့ ကစားခဲ့တဲ့(၈)ပွဲစလုံးကို အနိုင်ယူထားပြီး ဒုတိယနေရာက လက်ရှိချန်ပီယံကို (၈)မှတ်အထိ ဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲတက်နိုင်ခဲ့တဲ့ စပါးအသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်းတည်ငြိမ်မှုကတော့ တစ်နေ့ရွှေ တစ်နေ့ငွေဖြစ်နေပြီး အဆင့်(၉)မှာ ရောက်နေတာပါ။
ကြီး(၆)ကြီးမှာ အခြေအနေ အဆိုးရွားဆုံးလို့ဆိုရမယ့် မန်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ အဝေးကွင်းနိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးမှုနဲ့အတူ အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ အိုးထရက်ဖို့ မှာလည်း နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရဖို့ကို တော်တော်လေး ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ ရမှတ်အားဖြင့်လည်း (၉)မှတ်သာ ရထားသလို ဂိုးကွာခြားချက်ကလည်း အပေါင်း(၁)သာ ရှိထားပါတယ်။ ပွဲစဉ်(၁)တုန်းက ချဲလ်ဆီးအသင်းကို(၄)ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့လို့ အားလုံးက ယူနိုက်တက်ပြန်လာပြီလို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကြပေမဲ့ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ နိုင်ပွဲတွေနဲ့ဝေးခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကလည်း တစ်ပွဲထက်တစ်ပွဲ သိသာထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက မိနစ်(၇၀)ကျော်လာရင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ သွင်းဂိုးတွေနဲ့နိုင်ပွဲတွေရယူတက်တဲ့ ယူနိုက်တက်ဟာ အခုအချိန်မှာတော့ မိနစ်(၇၀)ကျော်တာနဲ့ အသင်းရဲ့လူငယ် အကယ်ဒမီထွက် ကစားသမားလေးတွေကိုသာ လူစားလဲအသုံးပြုနေရပြီး မရှုံးဖို့ ဆုတောင်းနေရတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ရာသီအကြိုတုန်းက လုံလောက်တဲ့ ကစားသမားအင်အားဖြည့်တင်းမှုမလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ အသင်းရဲ့အဓိက ကစားသမားအချို့ဒဏ်ရာကြောင့် မကစားနိုင်ချိန်မှာ လက်ရှိယူနိုက်တက်ရဲ့လူစာရင်းကို အသင်းငယ်လေးတွေကတောင် ပမာမခန့်လုပ်ချင်လာကြပါတယ်။
ဂိုးသမား ဒီဂီယာလက်စွမ်းကျဆင်းနေမှုက မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပြီး အဓိကပြဿနာကတော့ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ လူငယ်တွေအပေါ် အလွန်အမင်းယုံကြည်မှုနဲ့ ကွင်းလယ်နဲ့တိုက်စစ်မှာ လူသစ်တွေဖြည့်တင်းဖို့အတွက် အသင်းဘုတ်အဖွဲ့ကို အပူတပြင်း မတိုက်တွန်းခဲ့တာပါပဲ။ နည်းစနစ်ပိုင်းအရလည်း ယူနိုက်တက်ဟာ တိုက်စစ်ကစားနေသလား၊ ခံစစ်ကစားနေသလားဆိုတာကိုတောင် ဝေခွဲရခက်တဲ့အထိ ရေရာသေချာတဲ့ ကစားကွက်မရှိဘဲ လျော့တိလျော့ရဲ ဖြစ်နေတာပါ။
သေချာတာကတော့ ဆိုးလ်ရှားနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးတွေ ပရီးမီးယားလိဂ်လိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားနေရင်တော့ လက်ရှိတန်းဆင်းဇုန်အတွင်းဖျာဝင်ခင်းနေရတဲ့ အခြေအနေကနေ နောက်ဆို ဖျာပါရောင်းရတော့မယ့်ကိန်း ဆိုက်နေပြီပဲဖြစ်ပါကြောင်း…။
တနျးဆငျးဇုနျတိုကျပှဲမှာဖြာဝငျခငျးနတေဲ့ ယူနိုကျတကျတို့ ဘာတှမှေားနလေဲ???
ပရီးမီးယားလိဂျ(၈)ပှဲကစားပွီးခြိနျမှာပဲ ကွီး(၆)ကွီးဖွဈတဲ့ လီဗာပူးလျ၊ ခြဲလျဆီး၊ အာဆငျနယျ၊ မနျစီးတီး၊ စပါး နဲ့ မနျယူနိုကျတကျ အသငျးတှကွေားမှာ ရမှတျကှာဟခကျြတှကေလညျး မထငျမှတျလောကျအောငျ ကွီးမားလာခဲ့ပါတယျ။
အဆငျ့(၂)ကနေ (၅)အတှငျးရှိနတေဲ့ မနျစီးတီး၊ အာဆငျနယျနဲ့ခြဲလျဆီးတို့ဟာ ရမှတျကှာဟခကျြကဉျြးမွောငျးနပေမေဲ့၊ ထိပျဆုံးကပွေးနတေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးကတော့ ကစားခဲ့တဲ့(၈)ပှဲစလုံးကို အနိုငျယူထားပွီး ဒုတိယနရောက လကျရှိခနျြပီယံကို (၈)မှတျအထိ ဖွတျတောကျထားပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ခနျြပီယံလိဂျ ဗိုလျလုပှဲတကျနိုငျခဲ့တဲ့ စပါးအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးပိုငျးတညျငွိမျမှုကတော့ တဈနရှေှ့ေ တဈနငှေ့ဖွေဈနပွေီး အဆငျ့(၉)မှာ ရောကျနတောပါ။
ကွီး(၆)ကွီးမှာ အခွအေနေ အဆိုးရှားဆုံးလို့ဆိုရမယျ့ မနျယူနိုကျတကျအသငျးကတော့ အဝေးကှငျးနိုငျပှဲပြောကျဆုံးမှုနဲ့အတူ အိမျကှငျးဖွဈတဲ့ အိုးထရကျဖို့ မှာလညျး နိုငျပှဲတဈပှဲရဖို့ကို တျောတျောလေး ရုနျးကနျနရေပါတယျ။ ရမှတျအားဖွငျ့လညျး (၉)မှတျသာ ရထားသလို ဂိုးကှာခွားခကျြကလညျး အပေါငျး(၁)သာ ရှိထားပါတယျ။ ပှဲစဉျ(၁)တုနျးက ခြဲလျဆီးအသငျးကို(၄)ဂိုးပွတျနဲ့ အနိုငျရခဲ့လို့ အားလုံးက ယူနိုကျတကျပွနျလာပွီလို့ ထငျမှတျခဲ့ကွပမေဲ့ အဲဒီနောကျပိုငျးမှာတော့ နိုငျပှဲတှနေဲ့ဝေးခဲ့ပွီး ယူနိုကျတကျရဲ့အားနညျးခကျြတှကေလညျး တဈပှဲထကျတဈပှဲ သိသာထငျရှားလာခဲ့ပါတယျ။
တဈခြိနျတုနျးက မိနဈ(၇၀)ကြျောလာရငျ စိတျလှုပျရှားစရာ သှငျးဂိုးတှနေဲ့နိုငျပှဲတှရေယူတကျတဲ့ ယူနိုကျတကျဟာ အခုအခြိနျမှာတော့ မိနဈ(၇၀)ကြျောတာနဲ့ အသငျးရဲ့လူငယျ အကယျဒမီထှကျ ကစားသမားလေးတှကေိုသာ လူစားလဲအသုံးပွုနရေပွီး မရှုံးဖို့ ဆုတောငျးနရေတဲ့ အဖွဈကို ရောကျရှိနပေါပွီ။ ရာသီအကွိုတုနျးက လုံလောကျတဲ့ ကစားသမားအငျအားဖွညျ့တငျးမှုမလုပျခဲ့တဲ့အကြိုးဆကျအနနေဲ့ အသငျးရဲ့အဓိက ကစားသမားအခြို့ဒဏျရာကွောငျ့ မကစားနိုငျခြိနျမှာ လကျရှိယူနိုကျတကျရဲ့လူစာရငျးကို အသငျးငယျလေးတှကေတောငျ ပမာမခနျ့လုပျခငျြလာကွပါတယျ။
ဂိုးသမား ဒီဂီယာလကျစှမျးကဆြငျးနမှေုက မေးခှနျးထုတျစရာဖွဈပွီး အဓိကပွဿနာကတော့ ဆိုးလျရှားရဲ့ လူငယျတှအေပျေါ အလှနျအမငျးယုံကွညျမှုနဲ့ ကှငျးလယျနဲ့တိုကျစဈမှာ လူသဈတှဖွေညျ့တငျးဖို့အတှကျ အသငျးဘုတျအဖှဲ့ကို အပူတပွငျး မတိုကျတှနျးခဲ့တာပါပဲ။ နညျးစနဈပိုငျးအရလညျး ယူနိုကျတကျဟာ တိုကျစဈကစားနသေလား၊ ခံစဈကစားနသေလားဆိုတာကိုတောငျ ဝခှေဲရခကျတဲ့အထိ ရရောသခြောတဲ့ ကစားကှကျမရှိဘဲ လြော့တိလြော့ရဲ ဖွဈနတောပါ။
သခြောတာကတော့ ဆိုးလျရှားနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးတှေ ပရီးမီးယားလိဂျလိုပွိုငျပှဲကွီးမှာ ဒီအတိုငျးသာဆကျသှားနရေငျတော့ လကျရှိတနျးဆငျးဇုနျအတှငျးဖြာဝငျခငျးနရေတဲ့ အခွအေနကေနေ နောကျဆို ဖြာပါရောငျးရတော့မယျ့ကိနျး ဆိုကျနပွေီပဲဖွဈပါကွောငျး…။
Previous Article ဘရန်ဒန်ဗီရာနဲ့ ထိုးသတ်ရမယ့် ပွဲအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အောင်လအန်ဆန်း
Next Article ကာဂျစ္စတန်ကို နိုင်ပါ့မလား မြန်မာ???